५९ वर्ष पछि जुर्यो दुर्लभ संयोग, राशिचक्रमा उथलपुथल ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/५९ वर्ष पछि जुर्यो दुर्लभ संयोग, राशिचक्रमा उथलपुथल !
शुक्रबार शनि जयन्तिका दिन दुर्लभ संयोग जुर्ने भएको छ। सूर्य, बुध, शुक्र र चंद्रमा गरी चार ग्रह एकै राशि वृषमा रहेको कारण शनि जयन्तिका दिन दुर्लभ संयोग जुर्ने भएको हो।
पछिल्लो पटक सन् १९६१को शनि जयन्तिका दिन यस्तो दुर्लभ संयोग जुरेको थियो। जसपश्चात यस प्रकारको दुर्लभ संयोग शुक्रबार जुर्दैछ। यसरी एकै राशिमा चार ग्रह भएको अवस्थालाई चतुर्ग्रही योग भनिन्छ।
ज्योतिष विज्ञानका अनुसार बुध, शुक्र र चन्द्र एक साथ एकै राशिमा हुँदा आँधीबेरी आउने सम्भावना हुन्छ भने विश्वमा कष्ठ बढ्ने हुन्छ। साथै यस्तो अवस्थाले राशि अनुसार पनि फरक-फरक असर पार्ने ज्योतिषीहरु बताउँछन्।
चतुर्ग्रही योग मेष राशि हुनेहरुको लागि लाभप्रद रहनेछ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ। पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ। प्रतिभा प्रदर्शन गर्दै बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। आर्थिक रुपमा पनि समय सुखद रहन सक्ला।
प्रक्रिया नमिल्दा बन्न लागेका काम पनि बिग्रिनेछ्न्। नसोचेका व्यक्तिहरुबाट धोका हुन सक्ला। आर्थिक रुपमा समस्या बढ्न सक्ने हुँदा खर्चमा नियन्त्रण राख्न आवश्यक देखिन्छ। बेसुरमा दिइएको वचनले समस्या निम्त्याउन सक्ला।
मिथुन राशि हुनेहरुका लागि चतुर्ग्रही योग खासै सुखद रहने देखिँदैन। आर्थिक रुपमा समस्या बढ्नेछन्। स्वास्थ्यमा पनि समस्या बढ्ला। शत्रु सक्रिय रहने हुँदा सतर्क रहनु होला।
धर्मकर्म र सेवामूलक काम रुची बढ्नेछ। परोपकारी भावना जागृत हुनेछ भने सामाजिक दायित्व बढ्दा सम्मानको पात्र भइएला। प्रियजनसंगको भेटघाटले हौसला बढाउनेछ भने यात्रा सफल रहला।
सामाजिक कामले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी होला भने प्रयत्न गर्दा भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सफल भइएला।
मन अस्थिर रहला। खानपान र आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। सामान्य कामका लागि दौडधुप हुनेछ भने तत्काल फाइदा नहुने काममा जुट्नुपर्ला। परिबन्धले चुनौती निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्नेछ। मिहिनेत गर्दा पनि लाभ नमिल्दा निराशा छाउन सक्छ। नसोचेका व्यक्तिबाट धोका हुन सक्ने हुँदा सतर्क रहनु होला। कानुनी रुपमा पनि समस्या बढ्न सक्लान्।
वृश्चिक राशि रहनेहरुले सतर्कता अपनाउनु होला। व्यवसाय बिस्तार गर्ने सोचमा तुसारापात हुन सक्छ। गोपनियता बाहिरिन सक्ला। हतारमा गरिएको निर्णयले समस्या पैदा गर्न सक्ने देखिन्छ। परिवारमा कलह पैदा हुन पनि सक्ला।
चतुर्ग्रही योग धनु राशि हुनेहरुको लागि लाभप्रद रहने देखिन्छ। व्यवसायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अवसर मिल्नेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउनेछ। स्वास्थ्यमा रहेका समस्या देखि छुटकारा मिल्नेछ भने प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर मिल्न सक्ला।
मकर राशि हुनेहरुको लागि चुनौती बढ्नेछ। आफन्तजन तथा मित्रजनसंगको सम्बन्ध बिग्रनेछ भने परिवारमा पनि कलह बढ्न सक्ला। प्रतिष्पर्धामा भाग नलिएकै राम्रो होला। बोलि तथा व्यवहारमा नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ।
ग्रह स्थितिका कारण कुम्भ राशि हुनेहरुलाई दुख मात्र मिल्नेछ। व्याहारिक समस्याले याेजनाहरु रोकिनेछन्। बलजफ्ती गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्ला। साथीभाइसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्ला।
मीन राशि हुनेहरुको लागि चतुर्ग्रही योग धेरैनै लाभप्रद सावित हुनेछ। चिताएको काम सम्पादन हुनेछन्। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। मान-सम्मान पनि प्राप्त हुन सक्ला